မေလ ၆ ရက်နေ့က မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်က မကွေးပရိယတ္တိစာသင်တိုက်မှာ မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဦးရွှေကြည်တို့ တွေ့ဆုံကြစဉ်။
Photo:RFA/ Thiha Htun
မန္တလေး၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်ရဲ့ နာယက ဆရာတော်ဦးဝီရသူနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒိုင်းမွန်းရွှေကြည် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးရွှေကြည်တို့ ဘာသာရေးအရ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်ကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ် အရှေ့ပိုင်းက မကွေးပရိယတ္တိ စာသင်တိုက်မှာ မနေ့ညနေပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခုလို နှစ်ဘက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေ တစ်ဘက်နဲ့ တစ်ဘက်နားလည်မှုရှိလာတယ်လို့ ဆရာတော် ဦးဝီရသူက RFA ကို မိန့်ကြားပါတယ်။
"ဦးဇင်းတို့ ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆိုတာတွေ သိလာတယ်၊ ဒီလိုပဲ ရင်းနှီး၊ ထိတွေ့မယ်ဆိုရင် ဦးရွှေကြည်ဘက်ကလည်း ရင်းနှီးချင်တဲ့သူတွေ၊ ဦးဇင်းတို့ဘက်ကလည်း ထိတွေ့ချင်တဲ့သူတွေ တိုးပွားလာမယ်၊ အပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေ ရလာမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းမယ်လို့ ဦးဇင်းပြောနိုင်ပါတယ်"
ဒါ့အပြင် နှစ်ဘာသာငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊ နိုင်ငံတွင်း ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့်မဖြစ်ဘဲ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိရေးစတဲ့အချက်တွေကို ဆရာတော်ဦးဝီရသူက အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားပါတယ်။
ဦးရွှေကြည်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာအကြား ငြိမ်းချမ်းမှုရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ဖို့ အခုလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ဒီတွေ့ဆုံမှုက သာမန်တွေ့ဆုံမှုတော့ မဟုတ်ဘူး၊ အကြမ်းဖက်ခံရတာတွေ၊ အိုးအိမ်ဖျက်စီးခံရတာတွေကို အများဆုံးကူညီပေးတာ ရဟန်းတော်တွေလေ၊ ရဲထက်တောင် အများဆုံးကူညီပေးတယ်လေ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ တိုးတက်ချင်တယ်၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ပြီး အောင်မြင်ချင်တယ်၊ ဒီတော့ လက်တွေ့ကျကျ အလုပ်လုပ်မှ ရမယ်လေ"
ဒီဆွေးနွေးပွဲကို ဦးရွှေကြည်ဘက်က ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော် ဦးပေါမောက္ခက စီစဉ်ပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူကို RFA အဖွဲ့သား ဦးတင်အောင်ခိုင် ဆက်သွယ်လျောက်ထား မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
သူရဦးရွှေမန်းဖယ်ရှားမှု ကန်အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဝေဖန်
ဦးရွှေကြည်က မွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိပါ။ ဦးဝီရသူကတော့ ဗုဒ္ဒဘာသာဘက်က သံဃခေါင်းဆောင်မဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ xxxxxxxx သူစလိုက်တာကို နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ဖို့ အကွက်စောင့်နေသူအတွက် အကွက်ဆိုက်သွားတာပဲ။ အဆင်းဘီးတပ်ပေးလိုက်တဲ့ ဗျူဟာတခုပေါ့။
Practically effective actions should do for both sides. I have practically suffered from Muslim onesided selfishness. If Muslims want to stay peacefully in Burma, stay like Burmen under Burma constitutional law, not Islamist Law. They have always requested to allow them to live according to Islamist law. It's Impossible. Go back to stay in Bangaladesh... its better for everybody.
Such discussions between different religion seem to be good. But majority community/religion in Myanmar should stop killing minority community/religion should be stopped for ever. Otherwise the majority community/religion will becomeacruel KILLAR. Humanity isamajor subject to be studied well.
နေရပ်- ခ)ေက်ာ္ဇင္သန္႔ (မိုးကုတ္အေရွ႔ပိုင္း
လူမူနယ်ပယ်မှာ တိုးတက်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့ခိုင်မာဖို့ လူစွဲမူကွဲကအရေးမကြီးပါဘူး လူတိုင်းပာာအကျိုးကိုဆင်စာမိခြင်း မျှဝေနှီနောခြင်းသာ အကြောင်းရင်းမှန် အကောင်းစိုးရလဒ်ကိုမြင်သောကြောင့်ကြိုဆိုရပါမည်။ သတိ...ခေါက်ရိုးကျိုုးသောနိုင်ငံရေးလှည့်ကွပ်တွေ ဘာသာရေးနှင့်နိုင်ငံသားအသိ မရောမိရန် ပြန်တွေးတော့ ကိုးကွယ်မူမတူသော နိုင်ငံချစ်အာဇာနီခေါင်းဆောင်ကြီးများကို မမေ့ခါလေးစားလျှက်။ ကျနော်......
အပြုသဘောမဆောင်တာတော့ မဟုတ်ပါ။ မေးစရာလေးတွေရှိနေပါတယ်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဦးရွှေကြည်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လား? ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် မဟုတ်ရင် ဗုဒ္ဒဘာသာဘက်က ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လိုမျိုးနဲ့ ဆွေးနွေးတာ သဘာဝမကျသလို။ မူဆလင်တွေကို ကိုယ်စား ဘယ်လောက်ပြုသလဲ မေးစရာရှိနေပါတယ်။ မူဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေက ဘာလို့မဆွေးနွေးနိူင်ရတာလဲ?